Liibiya: 100 qof oo rayid oo kudhimatay dagaalada Rubicii labaad ee sanadkan - Tilmaan Media
Liibiya: 100 qof oo rayid oo kudhimatay dagaalada Rubicii labaad ee sanadkan
Sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay Qaramda Midoobay maalinkii Arbacada dad gaaraya 100 qof oo rayid ah ayaa lagu dilay dagaalada kasocda dalka Liibiya mudadii udhaxaysay bishii Abril iyo Juun ee sanadkaan. Tirada Dhimasho ayaa kadhigan kor ukac 65% marka labarbar dhigo saddexdii bilood ee sanadka ugu horaysay.
Ergada Qaramda Midoobay ee Liibiya ayaa sidoo kale sheegtay in dagaalada ay ku dhaawacmeen dad gaaraya 250 qof oo rayid ah. Waxayna muujinaysaa kor ukac kabadan 276% saddexdii bilood ee kahoraysay.
Khassaaraha nafeed ee dagaalka ayaa badankiis kadhacay gobolada galbeedka dhaca, halkaasoo ah meesha ay ku dagaalamayaan malleeshiyaadka ka mar qaata Khaliifa Xaftar iyo millatariga dowladda liibiya ee caalamku aqoonsan yahay.
Liibiya ayaa waxaa ka qarxay dagaal sokeeya kadib markii kacdoonkii dalkaas ka dhacay 2011 lagu riday kaligii taliyihii mudada dheer dalkaas xukumayay Mucammar Al-Qaddaafi. Riditaanka rijiimkii Qadaafi iyo dilkiisiiba waxaa ku xigay loolan u dhaxeeya maamulo kala jooga bariga iyo galbeedka dalka.
Dagaalada kasocda Liibiya Waxaa sii huriyay dalal shisheeye oo dhinacayada diriraya kala taageera. Dowladaha Massar, Ruushka,Faransiiska, Sucuudiga iyo Imaaraatka ayaa larumaysan yahay in ay taageeraan Jeneraal Khaliifa Xaftar si uu af gambiyo dowladda caalamku aqoonsan yaahy ee fadhida caasimada Tiriboli.
Madaxweyne Qoor Qoor oo Muqdisho ku qaabilay Safiirka Qadar ee Soomaaliya
WHO: Dhalinyaradu waxay qayb kayihiin faafidda COVID-19
Maali: madaxwaynaha oo magacaabay garsooryaasha Maxkamadda Dastuuriga ah
Somaliland oo heshiis iskaashi la sixiixatay Shiinaha
Dad kudhintay weeraro Al-shabaab ku qaadeen Luuq iyo Doolow
Qarax ismiidaamin ah oo kadhacay Muqdisho
Golaha Shacabka oo maanta kulan yeelanaya
Hindiya: Tobanaan qof oo kudhimatay burbur diyaaradeed
Wafdi kasocda Shiinaha oo Somaliland tagay
Sicirka Dahabka oo gaaray meeshii ugu saraysay abid
Lubnaan: Iskudhac dhexmaray mudaharaadayaal iyo ciidamada amaanka
Dad kudhintay roobab ka da’ay xeebaha koonfureed ee Soomaaliya